बिहे पछि किन बढ्छ महिलाको हिप ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
प्रकाशित मिति १२ बैशाख २०७५, बुधबार १६:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त ? उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ?
केटाहरुलाइ जान्ने जिज्ञासा नै यहि हो,
हेर्नुस यस्तो छ कारण
धेरै केटाहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ र जान्ने इच्छा हुन्छ । के कुराले गर्दा महिलाको शारीरिक स्वरूपमा परिवर्तन आउँछ त ? यो कुरा यहाँ भनिनेछ । एक सर्वेले यसको बारेमा पत्ता लगाएको छ ।
यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौन सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा ठुलो थियो । यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुँदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो ।
Post View Count: 61
क्षतिपूर्ति माग्न जादाँ प्रहरीको लाठी
काठमाडौं । ट्रकले पोल ढाल्दा जलेर मृत्यु भएका ललितपुर टीकाथली–१० का रमेश श्रेष्ठका आफन्त र गाउँलेमाथि प्रहरीले…
विवाहको तीन घन्टामै सम्बन्ध विच्छेद, दुलाहालाई जुत्ताको माला
एजेन्सी, १८ बैशाख । सामान्यतया विवाहपछि प्रायः जोडीको रमाइलो दाम्पत्य जीवन सुरु हुन्छ । तर, भारतका एक दुलाहालाई भने…
भूकम्पको झन्डै ३ वर्षमा १६ प्रतिशत घर निर्माण, ५६ प्रतिशत निर्माणाधीन
काठमाडौं । भूकम्पले क्षति पु¥याएको झन्डै ३…
अवकाश पाउनु एक दिन अगाडि सचिवमा बढुवा
काठमाडौ । मन्त्रिपरिषद्ले उमेर हदका कारण अवकास पाउन लागेका एक सहसचिवलाई एक दिन अघि सचिवमा बढुवा गरेको छ ।…
सिनर्जी फाइनान्सबाट अध्यक्षसहित पाँचको राजीनामा
काठमाडौं । २०७२ कात्तिक १५ गते सिनर्जी फाइनान्सका अध्यक्ष बनेका झपटबहादुर बोहरा र संचालकहरु उमेशलाल श्रेष्ठ, चन्द्रलोकप्रसाद श्रेष्ठ, शशीराज बज्रचार्य…
युएइमा कार्यरत सापकोटा दम्पत्तीको रहस्यमयी मृत्यु
युएई । युएइमा कार्यरत चितवनका एक दम्पत्तीको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको छ । युएइको दुबईमा कार्यरत चितवनको रत्ननगर बछौलीका…